than win htut (CircleRank: 63105, CircleRank in Thailand: 516) ─ CircleCount.com (Norway) Female
than win htut something of manythingsOccupation: Planning Editor @ Democratic Voice of BurmaLocation: RangoonHis ProfilesRankThis is the rank of 'than win htut' out of all Google+ Profiles.: 53,667 (GenderRankFor the gender 'Men'.: 34,260)His ProfilesRankThis is the rank of 'than win htut' out of all Google+ Profiles. in Thailand: 516 (GenderRankFor the gender 'Men'.: 321)His CircleRankThis is the rank of 'than win htut' out of all indexed profiles and pages at CircleCount.com.: 63,105His CircleRankThis is the rank of 'than win htut' out of all indexed profiles and pages at CircleCount.com. in Thailand: 516Followers: 1,724Following: 0Added to CircleCount.com: 01/18/2012That's the date, where than win htut has been indexed by CircleCount.com.This hasn't to be the date where the daily check has been started. (Update nowYou can update your stats by clicking on this link!This can takeafew seconds.)
﻿ActivityAverage numbers for the latest postings:0 comments per posting'Current posts' means the last 50 posts that are at the most4weeks old. So this metric givesapicture of how many comments someone has received recently.0 reshares per posting'Current posts' means the last 50 posts that are at the most4weeks old. So this metric givesapicture of .how often someone's posts have been reshared lately.1 +1's per posting'Current posts' means the last 50 posts that are at the most4weeks old. So this metric givesapicture of how many +1's someone has received on his or her posts recently.0 characters per posting'Current posts' means the last 50 posts that are at the most4weeks old. So this metric givesapicture of how many characters someone has used per post recently.Latest postings2013-05-16 06:28:25 (0 comments,0reshares, 1 +1s)
2013-03-05 10:58:58 (1 comments,2reshares,7+1s)တပို့တွဲလပြည့်နေ့က စစ်ကိုင်းမှာ ဘဲဥထုပွဲတော်။ ဖီချာလုပ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမလား။ ဒီတနှစ်တော့ပြီးသွားပါပြီ။ နောက်များမှပဲ။ 2013-03-04 12:30:47 (3 comments, 1 reshares, 8 +1s):) 2013-01-18 05:25:17 (9 comments,2reshares,6+1s)လူမှားနေပြီ ကိုချာတူး :)
2012-06-05 09:19:27 (0 comments,2reshares,2+1s)တောင်နီစံပြကျေးရွာဟာ တောင်ကြီးမြို့နယ် မိုင်းသော်အရှေ့ကျေးရွာအုပ်တွင်ရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်ပါတယ် ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသရှိမြို့များတွင် ငါးရက်ကိုတစ်ရက် ဈေးနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ဒေသခံ ဈေးသူဈေးသားများက ဈေးဆိုင်များဖွင့်လှစ်ရောင်းချကြပါတယ် တောင်၊ တောင်၊ညောင်၊ညောင်၊ဟဲ ဆိုပြီး တောင်ကြီးဈေး၊ တောင်နီဈေး၊ရွှေညောင်ဈေး၊ညောင်ရွှေဈေး၊ ဟဲဟိုဈေး အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးရောင်းချကြပါတယ်။ အခုအခါ တောင်ကြီးမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျော်ခေါင် ဦးဆောင်ပြီး တောင်ကြီးနယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ကျေးရွာအုပ်ရေးမှူး၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များ၊ တောင်နီးဈေးရှိ ဆိုင်ခန်းဈေးသယ်များ၊ ပျံကျဈေးများကို ကျေးရွာဈေးတွင်ဈေးမရောင်းရဆိုပြီး ရွာအပြင်မြောက်ဖျားမှာရှိတဲ့ ဈေးသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ရန် ဈေးသူဈေးသားများ ဈေးကော်မတီဝင်များ စည်းရုံးတိုင်ပင်ခြင်းမရှိပဲ အာဏာရှင်စံစံ အတင်ပြောင်းရွှေ့နေခြင်းကြောင့် မခံမရနိုင်ဖြစ်သော ကျေးရွာခံဈေးသယ်များ ဈေးပတ်လိုက်လံရောင်းချလျှက်ရှိသောဈေးသယ်များ မိမိ... more »
2012-06-02 11:58:14 (2 comments,0reshares,4+1s)ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် မယ်လစခန်းထဲက ဒေါ်စု
2012-05-30 03:53:07 (0 comments,0reshares,4+1s)မဟာချိုင်
2012-05-28 06:33:22 (1 comments,0reshares,3+1s)မန္တလေး မဟာအောင်မြေကျောက်မျက်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်း (ကျောက်မျက်ဈေး)မှာဒီနေ့ (၂၈-၅-၂၀၁၂) မနက် ၁၁ နာရီဝန်းကျင်က ဈေးသူဈေးသားများဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲ ပြုလုပ်ပါတယ်။ ဈေးသူဈေးသားများသဘောမတူတဲ့ကျောက်မျက်ဈေးလူဝင်ခွင့်ကဒ်မလုပ်ဖို့ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မဟာအောင်မြေကျောက်မျက်ရတနာဈေးပရဟိတလူမှုစီးပွားကူညီရေးကော်မတီ(ယာယီ)ကဒီကနေ့ မနက် ၁၀း၃၀ နာရီမှာ စာနယ်ဇင်းများနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဖိတ်ကြားခဲ့ပေမယ့် ကျောက်မျက်ဈေးတာဝန်ရှိသူများကတွေ့ဆုံခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး။ ကျောက်မျက်ဈေးပြင်ပမှာတွေ့ဖို့လုပ်ပေမယ့်လည်း ထပ်မံတားမြစ်ခြင်းခံရပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာကျောက်မျက်ဈေးနဲ့အလှမ်းအနဲငယ်ဝေးတဲ့ လက်ဖက်ရည်မှာပဲစာနယ်ဇင်းအချို့နဲ့သာ တွေ့ခွင့်ရခဲ့ကြပါတယ်။... more »
2012-05-22 19:51:35 (0 comments,0reshares,3+1s)ရန်ကုန်မြို့ မီးရရှိရေးအတွက် ဒီကနေ့ညက ဆူးလေဘုရားမှာရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေ ဖရောင်းတိုင်မီးထွန်းဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်....အခုလိုဆန္ဒပြတဲ့အပေါ် အာဏာပိုင်တွေဘက်က နှောက်ရှက်ဟန့်တားတာတွေမရှိခဲ့ဘဲထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းကိုင်တွယ်သွားခဲ့တဲ့အတွက် လာရောက်ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ ကြည့်ရှု့နေသူမြို့ခံတွေကျေနပ်မှု့ရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်...အခုဆန္ဒပြရာနေရာကို ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသူတွေဖြစ်တဲ့မမီးမီးတို့လည်းလာရောက် ပူးပေါင်းခဲ့ကြ ပါတယ်...အခုရက်ပိုင်းမန္တလေးမြို့မှာ ၃ရက်ဆက်တိုက်ဖရောင်းတိုင်မီးထွန်းဆန္ဒပြခဲ့ပြီးနောက် ရန်ကုန်မြို့မှာပထမနေ့ အဖြစ်အခုလိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်...နောက်နေ့တွေမှာလည်း အခုလိုငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ ဆန္ဒပြသူတွေကပြောပါတယ်....ညနေ ၆နာရီခွဲကနေ ည ၉ နာရီလောက်ခွဲအထိ ၂ ကျော်ကြာဆန္ဒပြပြီးအေးချမ်းစွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ကြ ပါတယ်...... more »
2012-05-21 16:43:14 (1 comments, 1 reshares,3+1s)mandalay ဖယောင်းတိုင်းထွန်းညှိဆန္ဒပြပွဲ ဒုတိယနေ့
2013-04-18 08:37:18 (0 comments,2reshares,7+1s)
2012-05-06 14:14:48 (0 comments,2reshares,4+1s)ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း
2012-05-06 14:09:00 (0 comments,0reshares,4+1s)နတ်မောက်မြို့
2012-05-04 11:56:46 (0 comments,0reshares, 1 +1s)မြင်းခြံခရိုင် ဆီမီးခုံကျေးရွာ ရှိ ဧရာဝတီ မြစ်မှ နွားထိုးကြိးမြို့သို့ မြစ်ရေတင်စီမံကိန်းပြုလုပ်ရာမှာ ဆီမီးခုံရွာ၊ ကုလားရွာ၊ ကတောရွာ၊ ရွာရှည်ရွာ၊ ကျောက်ကုန်းရွာ ၊ ကံနီကျေးရွာ သားများပိုင်ဆိုင်သောမြေကွက်များမှ ဖြတ်သန်းကာ ရေမြောင်းဖောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေကတော့ ကုလားပဲ ကြက်သွန် မြေပဲ ပဲစင်းငုံ ဆေး ဖရဲ တွေစိုက်ပျိုးတာဖြစ်ပါတယ် ရေမြောင်းအကျယ်က ပေ80 ရှီပီး ရေမြောင်းဖောက်လုပ်ခြင်းမခံရသော်လည်း ရေမြောင်းဖို့ ဘို့ မြေတုးယူခြင်းခံရပီးယာမြေကွက်များ မြောက်များစွာ ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ် အချို့မြေကွက်တွေဆိုရင် အနက် 15 ပေခန့်ထိ ရှီတဲ့အတွက် ရေကန်ပုံစံဖြစ်သွားပီးစိုက်ပျိုးလို့မရတော့တာတွေ ဖြစ်ကုန်ပါတယ် သက်ဆိုင်ရာ ကုမဏီများမှ တောင်သူများအား နစ်နာကြေးလဲမပေး စိုက်ပျိုးစရာမြေလဲ မရှီသဖြင့် အချို့တောင်သူများ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ပီး စားဝတ်နေရေးအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ် အချို့သော အခြားရွာများမှ တောင်သူများ နစ်နာကြေးရသော်လည်း ကတော ရွာမှ တောင်သူများမှာ မည်သည့်နစ်နာကြေးမှ မရရှီကြောင်း... more »
2012-05-02 13:06:07 (0 comments,0reshares,3+1s)ဧပြိလ၂၆ရက်နေ့တွင်မကွေးတိုင်းနတ်မောက်မြို့ဖုန်းတော်ပြည့်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲနှင့်ရုံးဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို(၇)အုပ်စုမြောက်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။မြိုကနယ်NLDအဖွဲ့ဝင်များကိုရွာလူထုမှအလံများနှင့်ဝှေ့ရမ်းကြိုဆိုခြင်း၊ပန်းကုံးများစွပ်ကြိုဆိုခဲ့ကြပါသည်။မနက်ပိုင်း၉နာရီတွင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏အစ်ကိုဦးနေအောင်နေထိုင်ခဲ့သည့်အိမ်တွင်ဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲနှင့်ရုံးခန်းဖွင်ပြုလုပ်ရာနတ်မောက်မြို့နယ်မှဦးအောင်တင်လင်း၊ဦးအောင်မြင့်သိန်းနှင့်ကျေးရွာမှဦးတင်ဝင်းတို့ကဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။မြို့နယ်NLDမှဦးအောင်တင်လင်းမှအဖွင့်အမှာစကားပြောကြာပြီးကျေးရွာမှဦးတင်ဝင်းမှသဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။NLDအဖွဲ့ဝင်ဦးချစ်ကိုကိုမှဒီမိုကရေစိအကြောင်းသိကောင်းစရာများ၊ပြင်ဆင်စရာလိုအပ်သည့်တဖက်သတ်ရေးဆွဲအတည်ပြုထားသောအခြေခံဖွဲ့စည်းပုံအချက်အချို့ကိုဟောပြောခဲ့ကြပါသည်။ကျေးရွာမှလူငယ်များ၊ကလေးများကကဗျာရွတ်ဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါသည်။ကျေးရွာများမှပြည်သူလူထု(၅၀၀)ကျော်တက်ရောက်ပါသည်။နေ့လယ်၁၁နာရီတွင်အခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။ ပေး... more »
2012-04-07 20:14:33 (0 comments,0reshares,0+1s)
2012-04-07 12:26:34 (0 comments, 1 reshares, 1 +1s)
2012-04-07 12:26:25 (0 comments,0reshares, 1 +1s)
2012-03-22 13:10:30 (0 comments,0reshares, 1 +1s)
2012-03-20 12:16:26 (0 comments, 1 reshares,7+1s)conference on media development in myanmar 2012
2012-03-15 16:43:37 (0 comments,0reshares,4+1s)မန္တလေး။ စစ်ကိုင်း။ မိတ္တီလာ။ နေပြည်တော် ခရီးစဉ် Photo by lbt.liberty
2012-03-15 16:43:12 (0 comments,0reshares, 1 +1s)
2012-03-15 16:42:39 (1 comments,0reshares,2+1s)မန္တလေး ။ စစ်ကိုင်း။ မိတ္တီလာ။ နေပြည်တော် ခရီးစဉ်။ Photo by lbt.liberty
2012-03-06 18:30:11 (1 comments,0reshares,0+1s)ဟင်္သာတ အုပ်ချုပ်ရေးရုံး ဗုံးပေါက်မှု
2012-05-07 15:53:23 (1 comments,0reshares,2+1s)
2012-03-03 22:58:57 (0 comments,0reshares,0+1s)
2012-03-03 07:52:58 (0 comments,0reshares, 1 +1s)သုံးရက်သုံးလ သုံးခုမြောက်မှာမန်းလေးသို့ရောက်လာသောဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကြိုဆိုကြသောပုံရိပ်များကိုမိတ်ဆွေများလက်ဆောင်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ကြည်နူးနိုင်ပါစေခင်သောကိုပေါက်(မန္တလေး)
2012-03-03 07:52:36 (4 comments,0reshares, 1 +1s)
2012-01-01 16:45:03 (8 comments,0reshares,4+1s)အဆုတ်သန့်ရှင်းရေး တိုက်ပွဲတော့စပီ။ အနှစ်၂၀ကျော် နီကိုတင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ ကိုလိုနီ ဘ၀ရောက်နေခဲ့တဲ့ ပဋိဇီဝ ကိုယ်တွင်းတပ်တွေကတော့ ခပ်ချာချာ ခနော်ခနဲ့ ဒီတော်လှန်ရေးမှာ သေချာအားမရှိ။ ကယ်ကြပါအုံး။ (သန်းဝင်းထွဋ်။ ပထမနေ့။ ပထမလ။ ၂၀၁၂)
2011-12-29 16:35:35 (2 comments,0reshares,4+1s)taLk2dVb on Google+ asafriendly platform for Gmailers, has different tastes; welcome to taLk2dVb!
2011-12-29 15:54:07 (0 comments,0reshares,0+1s)talk2dvb is of the people, for the poepoe, making voice for the voiceless.
2011-07-09 10:22:20 (18 comments,0reshares, 8 +1s)testing, wandering around G+